नेप्से परिसूचक : सोमबार २ अर्ब बराबरको सेयर किनबेच - Khabar Break | Khabar Break
नेप्से परिसूचक : सोमबार २ अर्ब बराबरको सेयर किनबेच
माघ ६ – साताको दोस्रो दिन सेयर बजारमा उत्साह कायमै रहेको छ । निरन्तर उकालो लागेको परिसूचकमा सोमबार करेक्सन हुँदा बजारमा करिब २ अर्ब बराबरको सेयर किनबेच भएको छ ।
सोमबारको नेप्से परिसूचक २६.५४ अंकले घटेर १३१७ अंकमा अडिएको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा करिब २ प्रतिशतले घटेको हो । गत दुई सातादेखि निरन्तर दोहोरो अंकले बढेर उच्च अंकमा पुगेको बजारमा नाफा बुक गर्नेहरुको हावी हुँदा त्यसको प्रभाव नेप्से परिसूचकमा देखिएको हो ।
दोहोरो अंकले घटेको बजारमा एक अर्ब ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन कूल १८२ कम्पनीको ५८ लाख ४६ हजार २३८ कित्ता सेयर खरिद बिक्री भएका छन् । जसमध्ये हिमालयन डिष्टिलरीको सबैभन्दा बढी अर्थात २० करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । त्यस्तै, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंकको १३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ ।
सोमबार कारोबारमा आएका १२ वटै समूह राताम्मे देखिएका छन् । आइतबार त्रिपल डिजिटले बढेका जीवन र निर्जीवन बीमा समूह त्रिपल डिजिटले नै ओरालो लागेका छन् । जीवन बीमा १५४ र निर्जीवन बीमा ११६ अंकले घटेका छन् । त्यस्तै, म्युचअल फण्ड समूह सामान्य अंकले घटेको छ भने बाँकी समूह दोहोरो अंकले ओरालो लागेका छन् ।
आज सुनको मुल्य स्थिर, कति छ तोलाको भाउ ?
बढ्यो सुनको मुल्य, हेर्नुहोस् आजको बजार भाउ
सक्छौ तोकिएको मूल्य देऊ, सक्दैनौ चिया फिर्ता देऊ : चिया किसान
घट्यो आज सुनको मुल्य, कति छ तोलाको भाउ ?
आयल निगमले घटायो डिजेल र मट्टितेलको मूल्य
५ दशमलव ३६ अङ्कले बढ्यो नेप्से
शिवम सिमेन्ट्सको सीइओमा भारतीय नागरिक नियुक्त
चार अंकले घट्यो नेप्से, सेयर बजारमा २११ करोडको कारोबार